Home News Soomaalida Ku Sugan Kenya oo Ka Cabanaya Safarada Soomaliya ee Kenya oo...
Soomaalida Ku Sugan Kenya oo Ka Cabanaya Safarada Soomaliya ee Kenya oo Sanado Badan An Laheyn Wax Safiir Ah oo Matala
Dowladda Federaalka Soomalaiya oo mudo sanad iyo dheeraad ah shaqeyneysa ayaa weli wax safiir ah aanan u magacaabin Safaaradda Kenya ee Soomaaliya.
Danjirihii Soomaaliya u fadhiyay dalka Kenya Jamaal Maxamed Xasan ayaa ka mid noqday Xukuumadda Xasan Cali Khayre oo uu ka qabtay Wasiirka Qorsheynta iyo Maalgashiga, tan iyo xilligaasi weli lama magacaabin safiir.
Kenya waa meesha Soomaalida ugu badan ay ku nooshahay wadamada bariga Afrika, Ganacsiyo badan ayayna ku leedahay, kummaanaan Qaxooti Soomaaliyeed ayaana ku jira xerooyinka Kenya.
Dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in ay wanaajisay xiriirka dalalka Dibadda, Farmaajo wuxuu socdaal nuuciisa aad u sareeyo ku tagay dalka Kenya, wuxuuna kulan gaar ah la yeeshay dhigiisa Uhuru Kenyatta.
Kenya ayaa ku dhawaaqday xilligaasi wixii ka dambeeyay Diyaaradaha ka yimaada Soomaaliya ee markii hore mari jiray Wajeer in si toos ah ay ugu degi degayaan Nairobi, wuxuuna Farmaajo ku faanay midaasi in ay tahay mid shacabka ay ka sugayeen.
Dadka arrimaha siyaasadda ku dhaliila Dowladda ayaa sheegaya in wax wanaagsan aysan aheyn dal muhiim ah inuu safiir la’aan ahaado sanad iyo wax ka badan, ma ahan keliya Kenya wadamo badan ayaysan Dowladda Federaalka u dirin Danjireyaal, kuwaasi oo Soomaali badan ay ku nooshahay.